Umatrasi omangalisayo, iibhedi ezi-4, indalo
Siyihostele encinci eco-friendly, enendawo enkulu yangaphandle, elungiselelwe bonke abathandi bendalo. Ukuba ufuna ukukhwela amahashe, usele iwayini ye-blackberry, ujabulele iziqhamo eziphilayo, wenze i-yoga, okanye udibane nabantu abatsha ...
Umthamo wehostele yethu ngabantu abayi-18. Sinegumbi lokulala elineebhedi ezi-4 (abantu abasi-8), amagumbi ama-2 aneebhedi ezi-2 (abantu aba-4), kunye negumbi labucala elinebhedi ephindwe kabini.
Onke amaxabiso asebenza kumagumbi ngaphandle kwa 8bedroom, ixabiso lawo lisebenza ebhedini.
Umnini wehostele, uJelena, ukwayintloko yombutho wobuntu onceda ulutsha ngamahashe, kunye nomxhasi wawo omkhulu. Yonke into yenzelwe abathandi bendalo.
Umthamo wehostele yethu ngabantu abayi-18. Sinegumbi lokulala elineebhedi ezi-4 (abantu abasi-8), amagumbi ama-2 aneebhedi ezi-2 (abantu aba-4), kunye negumbi labucala eli…
Ihostele yethu ibekwe ecaleni kwentaba yeBukulja, e-Aranđelovac - Bukovicka Sp, Embindini weSebia, kuphela iyure eli-1 lokuqhuba ukusuka eBelgrade. I-Bukovicka Spa yaziwa kakhulu ngezibonelelo zayo zamanzi ezimbiwa kwaye ipaki yayo eyi-22ha iphakathi kwezona paki zinkulu kwaye zintle kule ndawo yaseYurophu. Imithombo emininzi yamanzi amaminerali inokufumaneka epakini, kunye nemifanekiso eqingqiweyo ye-79 yemarble ye-sculptors edumileyo yasekhaya nakwamanye amazwe kunye neehotele I-Old Edifice (1872) kunye neSumadija (1939), i-Knjaz Milos Pavillion (1906), umqolomba waseRisovača kunye nesibhedlele esiKhethekileyo. I-spa ye-Bukovicka (1939), amachibi, amahlathi, I-mausoleum yentsapho yasebukhosini yaseSerbia njl.
Silapha ukukunceda nokuba sinakho, kwaye sinamavolontiya ethu aphesheya ukuba akugcwalise nawe